Bangenelwe iloli endlini | News24
Bangenelwe iloli endlini
UNkk Lindiwe Mdlule eme endlini yakhe ewiswe iloli.ISITHOMBE: lethiwe makhanya
UMNDENI wakaNkwanyana endaweni yaKwaMpumuza uthi ucela usizo kunoma ubani ongakwazi ukulula isandla ngemuva kokuba umuzi wabo wangenwa iloli wawa wonke.
Lo mndeni okumanje uhlala etendeni elincane uthi iloli langena endlini yawo yodaka eyayinamagumbi amane mha zili-12 kuMandulo (September).
UNks Lindiwe Mdluli nongumama wekhaya utshele i-Echo ukuthi wayesele yedwa ekhaya ngesikhathi kwenzeka lesi sigameko.
“Ngakuyizikhathi zasemini izingane zonke zingekho ziye esikoleni.
Ngangisemnyango ngiyokha amanzi ngebhakede empompini ngesikhathi ngizwa umsindo nengathi uma ngithi ngiyabheka ngabona ukuthi iloli.Indlela elaligijima ngayo laqale lashaya isigxobo sikagesi ngabe sengibaleka ngiya komakhelwane ngoba ngangizitshela ukuthi liza kumina. Angibange ngisabona ukuthi langena kanjani endlini kodwa ngezwa ngomsindo nje ngathi ngiyabona yonke indlu isiwe phansi.
“Yonke into eyayiphakathi yalimala sasala nezinto ezincane esakwazi ukuthi sizikhiphe kodwa izinto eziningi asikwazanga ukuzikhipha kokubalwa kuzona ngisho omazisi kanye nezitifiketi zokuzalwa zezingane kanye namakhadi okuhola imali yesibonelelo sika hulumeni,” kubeka yena.
Uthe kumanje bahlala etendeni abalinikezwa umasipala kanye nezimpontshi eziyisithupha kanye nezingubo eziyisithupha kodwa kuyafana loko akwanele njengoba behlala beyisi thupha etendeni elilodwa elincane.
“Abantwana bethu ababili abadala sekuze kwasiphoqa ukuba sibacelele ukuthi balale komakhelwane ngoba ayikho indawo kuleli tende yokuthi singandlala izimpontshi ezingasenela sonke ukuthi silale kuzona. Asinawo ngisho ugesi uma sifuna ukupheka sibasa phansi emnyango.
“Impilo imile asikwazi ukwenza lutho. Izingane ngeke zize zikwazi ngisho ukuthola imali yesibonelelo kule nyanga ngoba azinawo amakhadi. Nginengane efunda umatikuletsheni ekumele engabe ngiyoyishayela umazisi kodwa angikwazi ngoba kwamina anginawo. Nginethemba lokuthi uma ngabe sekususwe iloli ngizokwazi ukuthi ngithothe izinto ezibalulekile njengoba ngangizipakishe zonke ndawo kwifayela. Ngiyathemba ukuthi azizange zingenwe imvula njengoba kade kunetha.”